रणसिँहकिटेनीकी सरीता राना रु २ करोड ५० लाख ठगी गरेको अभियोगमा पक्राउ ! – ebaglung.com
रणसिँहकिटेनीकी सरीता राना रु २ करोड ५० लाख ठगी गरेको अभियोगमा पक्राउ !
२०७५ माघ ८, मंगलवार २०:५९	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
बागलुङ २०७५ माघ ८ । बागलुङ जिल्ला बडीगाड गाउँपालिका-८ रणसिँहकिटेनी घर भएकी ४२ वर्षीया स्नेहा भन्ने सरिताकुमारी रानालाई विभिन्न व्यक्तिहरुलाई ठगी गरेको अभियोगमा कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
बिभिन्न व्यक्तिहरुलाई घर जग्गा खरिद गर्ने, जग्गासँग घर साटी दिने जस्ता बिभिन्न प्रलोभन देखाई अन्दाजी २ करोड ५० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगमा कास्की पोखरा महानगरपालिका-२६ अघौं डेरा गरी बस्ने रानालाई प्रहरीले पक्राउ कगरेको हो ।
रानाले मेरो परिवार लण्डनमा छ भनि पोखरा महानगरपालिकास्थित बिभिन्न स्थान बस्ने चिनजानका व्यक्तिहरुलाई बिभिन्न प्रलोभन देखाई आफूलाई आपत पर्‍यो ऋण दिनुहोस भनि उक्त रकम सापटी मागी फिर्ता नदिई ठगी गरी फरार भएकोमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट खटिएको प्रहरीले खोजी गर्नेक्रममा काठमाडौं दरबारमार्गबाट फेला पारी पक्राउ गरेको हो ।
सरीता निकै रवाफका साथ लेखनाथको अर्घौचोकमा डेरा गरी बस्दै आएकी थिइन् । नयाँँ मोडलको क्रेटा गाडी, ड्राइभर, घरको काम गर्ने सहयोगी साथ बसेकी सरीताको ठाँट देखेर नै स्थानीय फसेका हुनसक्ने विश्वास गरिएको छ । उनको परिवार लण्डनमा नभएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पोखरा महानगरपालिका २६ र २७ का जीतबहादुर पुन, नरमाया थापामगर, तारा पुन थापा, चन्द्रबहादुर सुनार, दिलमाया पुन लगायत १० जनाले सरीताबाट ठगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उजुरी दिएका थिए । उनीहरुले उजुरी दर्ता गरेपछि सरीता विरुद्ध अरु पनि उजुरी दर्ता भएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार हालसम्म ५० भन्दा बढी सरिताबाट ठगिएको भन्दै प्रहरीसंग नाम टिपाएका छन् । अरु कुनै व्यवसाय नगर्ने उनले अर्घौचोक आसपास कै व्यक्तिलाई प्रभावमा पारेर ठग्दै आएकी थिईन् । २ करोड ५० लाख रुपैया भन्दा बढी रकम तिर्न बाकी रहेको सरीताले प्रहरीसँग स्वीकार गरेकी छन् । व्यवहार बिग्रँदै गएपछि सापटी पनि बढेको र तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि भागेको उनले बताएकी छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख ओम रानाले घटनाको छानबिन भइरहेको बताएका छन् । यसअघि उनले काठमाण्डौ, विराटनगर, बुटवल लगायतका स्थानहरुमा पनि ठगी गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ ।
समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम : स्वच्छ सडक अभियान बिषय अन्तर्किया कार्यक्रम सम्पन्न
आजको तस्बीर : अब गर्मी चढ्छ … !